Fiji neDominican Republic: Vane Hutano maAmerican Vashanyi vanofa mumahotera ehotera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Fiji neDominican Republic: Vane Hutano maAmerican Vashanyi vanofa mumahotera ehotera
Kuputsa Kufamba Nhau • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • Fiji Breaking Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Wedzera Fiji kune irwo runyorwa rwezvino nyika mbiri umo vana vashanyi vane hutano veAmerica vakafa mukati mevhiki pasinganzwisisike uye zvisingatsanangurike mamiriro. Kufa kwevaAmerican Vashanyi mumakamuri avo ehotera muFiji neDominican Republic neimwe nzira kwakabatana here? Tiri kubata nekubatana kwezvisikwa zvikonzero uye nguva, kana paine kubatana kana zvimwe mufananidzo muhombe?
Uku kufa kungave kutanga kwechimwe chinhu chikuru here? Iko kune yakajairika dhinomineta, kana kunyangwe nyowani yekutyisa kurwisa mukugadzira? Dhipatimendi reUS for Disease Control rave kuongorora nevakuru vemunharaunda muDominican Republic neFiji.
Hosha isingazivikanwe iyo yakauraya vaviri veTexas pazororo rekurota kuenda kuFiji yakaramba ichinetsa vanachiremba neChitatu sezvo zviremera munyika yechitsuwa cheSouth Pacific vakati vakatonga furuwenza sechikonzero chingakonzera kufa kwavo.
Vaviri pazororo rekurota kuFiji vakaramba vachinetsa vanachiremba neChitatu sezvo zviremera munyika yechitsuwa cheSouth Pacific Bazi rezvehutano muFiji rakati ongororo yezvakakonzera kufa iri kuenderera mberi uye kuti havana mhinduro chaidzo pane zvakauraya vanoita sevane hutano. vaviri.
Zvichakadaro, mukadzi wePennsylvania akadonha ndokufira kuBahia Principe Hotel muLa Romana, Dominican Republic. David Paul, 37, nemukadzi wake, Michelle Paul, ane makore makumi matatu nematatu, vakafa mazuva maviri vakaparadzana mushure mekuuya nechirwere chemhirizhonga chakakonzera kurutsa, manyoka, kuoma maoko nekushaya mweya wekufema zvakare muDominican Republic muhotera iri padyo.
Miranda Schaup-Werner, 41, nemurume wake, Dan Werner, vakapinda muBahia Principe Hotel muLa Romana musi wa25 Chivabvu kunopemberera zuva ravo rechipfumbamwe remuchato, asi panopera zuva, mukadzi weAllentown anenge afa.
Pane imwe nguva, iye aive akagara ipapo achifara achinyemwerera uye achitora mifananidzo uye nguva yakatevera aive nekurwadziwa kwakanyanya ndokudaidzira Dan uye akabva adonha.
Iyo US State department iri kutora mamiriro acho zvakanyanya uye iri kuteerera.